Dowladda Riddada oo dhibaato ku haysa Naafada Ciidankii Xoogga ee ku sugan Isbitaalka Martiini. | Halganka Online
Dowladda Riddada oo dhibaato ku haysa Naafada Ciidankii Xoogga ee ku sugan Isbitaalka Martiini.
Dowladda Gaala raaca ah ee la shaqaysa ciidamada Gaalada AMISOM ayaa bilaawday in ay dhibaatayso shacabka Muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa naafada ah ee aan qabin lixda lixaad.
Sarkaal katirsan wasiirada kooxda Ridada ayaa hanjabaad iyo caga juglayn u jeediyay naafada Ciidanka Xoogga ee ku sugan Isbitaalka Martiini magaalada Muqdisho kadib markii ay naafadu ka dhiidhiyeen dhisme ay dowladda Ridada ka damacsantahay gudaha Isbitaalka.
Afhayeenka ciidanka naafada Martiin Cabdi Mahad ayaa Idaacadda Andalus qaybteeda Baydhabo u sheegay in uu u gacan qaaday Cabdi Raxmaan Ibbi oo Dowladda Riddada ugu magacaaban Wasiirka Kaluumaysiga.
Naafada Ciidanka Xoogga waxay sheegeen in dhibaato ay kasoo gaartay fara gelin ay Dowladda Riddada kusoo samaysay Isbitaalka kadibna ay dadka Muxsiniinta Somalida ah ay ka jarteen Gargaarkii ay usoo diri jireen maadaama ay meesha soo gashay dowlada Riddada ah wuxuuna ka codsaday dadka Muxsiniinta ah in ay sii wadaan kaalmadii ay siin jireen.
Kooxda Riddada ayaa dhowaan sheegtay in ay Guryaha ka Burburi doonto Dadka Barakacayaasha ah ee degan Xeradii Hore ee Afisyooni degmada Waaberi magaalada Muqdisho.
« Amiirka Dawladda Islaamiga ah ee Ciraq oo ku baaqay in lala midoobo Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab. Murtadkii degmada Xamar jajab oo ku Bakhtiye qarax lala beegsaday iyo Afhayeenkii Mooryaanta booliiska dowlada ridada ah oo dhaawac ah »